हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो पढ्नुहोस् कुकी नीति थप विवरणहरू लागि। बुझे
CRM मूल्य निर्धारण
संगठित र पोषक तत्वहरू
इमेल समक्रमण र ट्रयाकिंग,
तपाईंले हामीलाई दिनुहुन्छ
हामीले जम्मा गरेको डेटा
एकत्रित जानकारीको प्रयोग
हामी तपाईंको जानकारी कसरी सुरक्षित गर्छौँ
सामान्य नियम साझा
हामी जो डेटा देखाउन सक्छौँ
अन्तिम अपडेट मा: 24 मई 2018
तपाईंको जानकारी हाम्रो रूपमा महत्त्वपूर्ण छ र हामी तपाईंको जानकारीको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं। यो प्राइभेसी नीतिले बताउँछ कि कम्पनी हबले कुन जानकारीलाई सङ्कलन गर्छ, कसरी यो तपाइँको डिजिटल इजाजतपत्र मार्फत यसको जानकारी एकत्र गर्दछ र यो कसरी यो एकत्रित जानकारी प्रयोग गर्दछ। (I) कम्पनी हब वेब / मोबाइल अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरेर यो गोपनीयता नीतिको समीक्षा गर्न अनुरोध गरिएको छ, (ii) वेबसाइट companyhub.com र / वा (iii) कुनै पनि र सबै सम्बन्धित साइटहरू प्रयोग गरेर अनुप्रयोगहरू, सेवाहरू र उपकरणहरू प्रयोग गरेर र दर्ता गर्दै। , तपाईलाई कसरी पहुँच गर्ने वा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो बुझाइको उद्देश्यका लागि, कम्पनी हब अनुप्रयोग, वेबसाइट र सबै सम्बन्धित साइटहरू, अनुप्रयोगहरू, सेवाहरू र उपकरणहरू यहाँ छन् सामूहिक रूपले भनिन्छ 'COMPANYHUB PLATFORM'.
हामी तपाईंलाई वेब इन्फेस प्रयोग गरेर कम्पनी हब प्लेटफर्म जडान वा प्रयोग गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछौं। यो प्राइभेसी नीतिको प्रावधानहरू सबै त्यस्ता वेब पहुँच र CompanyHub प्लेटफर्मको प्रयोगमा लागू हुन्छ।
CompanyHub प्लेटफर्ममा पहुँच र अनुरोध गरिएको जानकारी प्रदान गरेर, तपाइँ हाम्रो गोपनीयता नीतिमा सहमत हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो गोपनीयता नीति समय-समय मा उचित परिवर्तन गर्न को लागी अधिकार छ, यसको पोस्टिंग मा प्रभावकारी हुनेछ। हामी तपाईंलाई केवल त्यस्ता मामलाहरूमा अंतर गर्नेछौं जुन यस गोपनीयता नीतिमा पर्याप्त परिवर्तनहरू छन्। कम्पनी हब प्लेटफर्मको तपाईंको निरन्तर प्रयोग, यस्तो इन्टिमिशनको प्राप्ति पछि, तपाईंको परिवर्तनको रूपमा स्वीकार्य स्वीकृतिको रूपमा विचार गरिनेछ।
CompanyHub प्लेटफर्म द्वारा प्रदान गरिएको उत्पादन र सेवाहरू तेरह वर्ष (13) भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई निर्देशित गरिएको छैन। यदि तपाईं एक सानो हो भने, हामी तपाईंलाई अनुरोध गर्दछौं कि कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा साझेदारी वा हाम्रो उत्पादन र / वा सेवाहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
हामी जानकारी प्रदान गर्दछौं जुन तपाइँले हामीलाई दिनुहुन्छ वा हामीलाई पहुँच गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। जानकारी समावेश हुन सक्छ तर तपाईंको नाम, छवि, जन्म मिति, इ-मेल र / वा भौतिक ठेगाना, टेलिफोन र / वा मोबाइल नम्बर, लिङ्ग, सम्पर्क सूचिहरू, सोशल मिडिया जानकारी र प्रोफाइल, स्थान (जीपीएस) जानकारी, गतिविधि र प्रदर्शनमा सीमित छैन जानकारी र जब भुक्तानी मोड / क्रेडिट कार्ड / बैंक खाताको सन्दर्भमा आवश्यक जानकारी। तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँ यी जानकारीहरू स्वैच्छिक रूपमा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं यी जानकारी खुलासा गर्न चाहानुहुन्छ भने, जुन तपाईं निःशुल्क हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ कि तपाईं कम्पनी हब प्लेटफर्म द्वारा प्रदान गरिएको केही सेवाहरू लाभान्वित गर्न सक्नुहुन्न।
हामी स्वचालित रूपमा निम्न प्रकारका सूचनाहरू सङ्कलन गर्न कम्पनी हब प्लेटफर्मको प्रयोग र पहुँच प्रदान गर्नका लागि, र हामीलाई व्यक्तिगत अनुभव र तपाईंको अनुभव सुधार गर्न हामी निम्न प्रकारका सूचनाहरू सङ्कलन गर्न सक्दछौं:
तपाईंको कम्प्युटर वा उपकरण कम्पनी हब प्लेटफार्म, तपाईंको IP ठेगाना, ब्राउजर, ब्राउजर संस्करण, अपरेटिङ सिस्टम, रेफ्रर, मोबाइल नेटवर्क, पृष्ठ हेराई, विज्ञापन डाटा, मानक वेब लग डेटा आदिको पहुँचको बारेमा जानकारी।
तपाईंले विभिन्न सूचनाहरू प्रदान गर्नुभएको सूचना जस्तै अनुवर्ती मेलहरू, दैनिक कार्य सारांशहरू, कार्य सूचनाहरू, कार्य अनुस्मारकहरू, डेटा आयात निर्यात सूचनाहरू, बल्कमार्कहरू सूचनाहरू, चलानीहरू र / वा न्यूजलेटरहरू जस्तै नाम, इ-मेल ठेगाना आदि।
कुनै पनि खरिद र लेनदेनको सम्बन्धमा तपाईले CompanyHub प्लेटफर्म मार्फत प्रविष्ट गर्नुहुने नाम, ठेगाना, इ-मेल ठेगाना, टेलिफोन, कार्ड विवरण आदि।
तपाईंले कम्पनी हब प्लेटफर्मसँग जडान गर्नुभएको प्रणालीहरूबाट जानकारी जस्तै तपाईंको ईमेल खाताहरू क्यालेन्डरहरू। यदि तपाइँले हामीलाई तपाईंको Google / अन्य ईमेल खाताको पहुँच गर्न प्राधिकृत गर्नुहुन्छ भने, हामी प्राधिकरणको मितिबाट हामी सबै इमेल वार्ताहरू अन्तिम6(6) मेटिनेछौं र तपाईलाई ईमेल खाता हटाउन जारी राख्नेछौं। हाम्रा प्रणालीहरूले यी ईमेलहरू विश्लेषण गर्दछन् र तपाईंको इमेल वार्तालापको आधारमा महत्त्वपूर्ण सम्पर्कहरू विभाजित गर्नेछ र सम्पर्कहरूसँग इमेलहरू पनि सम्बद्ध गर्दछ।
हामी तपाइँबाट अन्य तरिकामा जानकारी सङ्कलन गर्न सक्दछौं, जस्तै जब तपाइँ हाम्रो ग्राहक सहयोग टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, जब तपाइँ सर्वेक्षणको जवाफ दिनुहुन्छ र / वा हाम्रो बिक्री र मार्केटिंग वा प्राविधिक सहयोग टोलीका सदस्यहरूसँगको कुराकानीको समयमा। हामी टेलीफोन वा कुराकानीहरू तपाईंको वा तर्फबाट तपाइँको तर्फबाट र हाम्रो समर्थन कर्मचारीको आन्तरिक गुणस्तर र प्रशिक्षण उद्देश्यको लागि काम गर्दछ। हामीसँग सञ्चार गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईंको सञ्चारलाई थप सूचना वा चेतावनी बिना रेकर्डिङ, निरीक्षण गरिएको वा रेकर्ड हुन सक्छ।
हामी (हामीसँग काम गर्छौं कम्पनीहरू सहित) तपाईंको कम्प्युटर वा अन्य उपकरणमा साना डेटा फाइलहरू राख्न सक्छ। यी डेटा फाइलहरू कुकीहरू, पिक्सेल ट्यागहरू, फ्ल्यास कुकीहरू, वेब बेकनहरू (वेब ​​बेकनहरू हुन् जुन हाम्रो ट्रयाक गरिएका इ-मेलहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ) वा तपाईंको ब्राउजर वा सम्बन्धित अनुप्रयोगहरू द्वारा प्रदान गरिएको अन्य स्थानीय भण्डारण (सामूहिक रूपमा "कुकीहरू")। हामी यी कुकीहरू तपाईंलाई व्यापारीको रूपमा चिन्न प्रयोग गर्दछौं; हाम्रो सेवाहरू, सामग्री, र संचार अनुकूलन गर्नुहोस्; संचार प्रभावशीलता को माप सहयोग गर्नुहोस् कि तपाईंको खाता सुरक्षा सम्झौता छैन; जोखिम घटाउन र धोखाधडी रोक्न; र हाम्रा साइटहरू र हाम्रा सेवाहरूमा भरोसा र सुरक्षालाई बढावा दिन।
तपाईंलाई धोखाधडीबाट सुरक्षा र तपाईंको व्यक्तिगत, व्यावसायिक र व्यवसायिक जानकारीको प्रयोगको दुरुपयोग गर्न हामी तपाईँको वेबसाइट वा कम्पनी हब प्लेटफर्म सेवाहरूसँग तपाइँ र तपाईंको सम्बन्धको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न सक्दछौं। कुनै पनि दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर वा गतिविधि पहिचान गर्न हामी पनि तपाइँको कम्प्युटर, मोबाइल फोन वा अन्य पहुँच उपकरणको मूल्यांकन गर्न सक्छौं।
जानकारी को उपयोग गरिएको छ
व्यक्तिगत, व्यावसायिक र व्यावसायिक जानकारी एकत्रित गर्न हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य एक सुरक्षित, चिकनी, कुशल, र अनुकूलित CRM अनुभव प्रदान गर्न को लागी हो। हाम्रो वेबसाइट मार्फत पेश गरिएको व्यक्तिगत जानकारी केवल यसको लागि प्रयोग गरिनेछ:
तपाईंको लागि कम्पनी हब निजीकृत गर्नुहोस्;
ग्राहक सहयोग प्रदान गर्नुहोस्;
जानकारी प्रक्रिया गर्नुहोस् र तपाईंको बैठकहरू / सम्पर्कहरूको बारे सूचनाहरू / अद्यावधिकहरू / रिमाइन्डरहरू पठाउनुहोस्;
विवादहरू समाधान गर्नुहोस्, शुल्कहरू इकट्ठा गर्नुहोस्, र समस्याहरू निवारण गर्नुहोस्;
सम्भावित निषिद्ध वा गैरकानूनी गतिविधिहरू रोक्नुहोस्, र प्रयोगका सर्तहरू लागू गर्नुहोस्;
कम्पनी हब प्लेटफर्म सेवाहरू अनुकूलन, उपाय, र सुधार गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइटहरू, अन्तरिक्षहरू, उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरूको सामग्री, लेआउट, र अपरेसन;
तपाईंको संचार प्राथमिकताहरूमा आधारित लक्षित सामग्री, मार्केटिंग, सेवा अपडेट सूचनाहरू, र प्रचार प्रस्तावहरू डेलिभर गर्नुहोस्;
भ्वाईस कल वा पाठ (एसएमएस) वा ईमेल सन्देश मार्फत राखेर तपाईंको द्वारा प्रदान गरिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्;
बयानहरू, इनभ्वाइसहरू, भुक्तानी अनुस्मारकहरू तपाइँलाई पठाउनुहोस् र तपाईंबाट भुक्तानीहरू सङ्कलन गर्नुहोस्
संरक्षण र साझेदारीको जानकारी
हामी अत्यधिक व्यक्तिगत "अमेजन क्लाउड" सर्भरहरूमा होस्ट गरिएको हाम्रो अनुप्रयोग मार्फत तपाइँका व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण र प्रशोधन गर्दछौं। डाटा होस्टिंग स्थान निर्धारणहरू सधैं विलम्बता घटाउन र तपाइँ र तपाइँको प्रयोगकर्ताहरूको लागि इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त गर्नमा आधारित हुन्छन्। वेबकै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हामीसँग उपयुक्त इजाजत पत्रहरूसँग दर्ता भएका हाम्रा डोमेनहरू पनि छन्। हामी तपाईंको जानकारीलाई क्षतिपूर्ति, दुरुपयोग, अनधिकृत पहुँच, प्रकटीकरण र परिवर्तन को खतरा कम गर्न भौतिक, प्राविधिक, र प्रशासनिक सुरक्षा उपायहरू प्रयोग गरेर सुरक्षाको सुरक्षा गर्दछौं। हामीले प्रयोग गर्ने केही सुरक्षा फर्महरू र डाटा एन्क्रिप्सनहरू, हाम्रा डेटा केन्द्रहरूमा शारीरिक पहुँच नियन्त्रण र सूचना पहुँच प्राधिकरण नियन्त्रणहरू छन्।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत उद्देश्य बिना तेस्रो पक्षलाई तपाईंको स्पष्ट सहमति बिना बेवास्ता गर्न वा व्यक्तिगत, व्यावसायिक र व्यावसायिक जानकारी बेच्न वा भाँडामा लिएनौँ। हामी तपाईको जानकारी एकत्र गर्न सक्छौं जुन हामी सङ्कलन गर्दछौं र यसलाई कम्पनी हब प्लेटफर्मलाई सुधार र निजीकृत गर्न प्रयोग गर्दछौं। सामान्य नियमको रूपमा, हामीले आवश्यक जानकारी अनुसार हामी तपाईंको जानकारी प्रयोग गर्दछौं र खुलासा गर्दछौं: (i) लागू कानून अनुसार, वा भुक्तानी विधि नियम; (ii) हाम्रो नियम र सर्तहरू लागू गर्न; (iii) हाम्रो अधिकार, गोपनीयता, सुरक्षा वा सम्पत्ति, र / वा हाम्रो सहयोगीहरूको रक्षा गर्न; र (iv) अदालत, कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरू, नियामक निकायहरू, र अन्य सार्वजनिक र सरकारी प्राधिकरणका अनुरोधहरूलाई प्रतिक्रिया दिन, जुन तपाइँको देशको निवास बाहिरका अधिकारीहरू समावेश हुन सक्छ।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा विश्वसनीय तेस्रो पक्षहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छौं जस्तै:
सम्भावित गैरकानूनी कार्य र हाम्रो नीतिहरूको उल्लङ्घन पत्ता लगाउन र रोक्नको लागि संयुक्त सामग्री, उत्पादन, र सेवाहरू (जस्तै दर्ता, लेनदेन र ग्राहक सहयोग) प्रदान गर्न हाम्रो आमाबाबुको कम्पनी र सहयोगीहरू (सामूहिक रूपमा हाम्रो कर्पोरेट परिवार) सदस्यहरू। हाम्रो कर्पोरेट परिवारका सदस्यहरूले तपाईलाई उनीहरूको सेवा अनुरोध गरेको भएमा मार्केटिङ संचार पठाउन यो जानकारी प्रयोग गर्नेछ।
हामीले विश्वव्यापी संस्थाहरूसँग डेटा साझेदारी गर्छौं जुन हामी नियन्त्रण गर्छौं, हाम्रो नियन्त्रणमा रहेका छौं, वा हाम्रो सामान्य नियन्त्रणमा छ, हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध गराउन।
हामी सेवा प्रदायकहरूको साथ जानकारी साझा गर्दछौं जसले हामीलाई हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध गराउँदछ। सेवा प्रदायकहरूले हामीलाई भुक्तानी प्रक्रिया (यानी भुक्तानी प्रदायक, भुक्तानी गेटवे), वेबसाइट होस्टिङ, डाटा विश्लेषण, सूचना प्रविधि र सम्बन्धित पूर्वाधार, ग्राहक सेवा, ईमेल डिलीवरी, र लेखा परीक्षण जस्ता चीजहरूसँग मद्दत गर्दछ। अनुबंध अन्तर्गत सेवा प्रदायक जसले हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्दछ। , जस्तै धोखाधड़ी रोकथाम, मार्केटिंग, र प्रविधि सेवाहरू। हाम्रो अनुबंधहरूले यो सेवा प्रदायकलाई मात्र सेवाका लागि मात्र प्रयोग गर्दछ र उनीहरूको आफ्नै लाभको लागि वा हाम्रो गोपनीयता नीतिहरूको उल्लङ्घनमा मात्र तपाइँका जानकारीहरू मात्र प्रयोग गर्दछ।
कानून प्रवर्तन, सरकारी अधिकारीहरू, वा अन्य तेस्रो पक्षहरू एक उपपूर्ति, अदालतको आदेश, वा अन्य कानुनी प्रक्रिया वा आवश्यकता वा हाम्रो वा एक सहयोगीको लागी लागी एक लागी लागू; जब हामी कानूनसँग पालन गर्न त्यसो गर्न आवश्यक छ; वा जब हामी विश्वास गर्छौं, हाम्रो एकमात्र विवेकमा, व्यक्तिगत, व्यावसायिक र व्यापारिक जानकारीको प्रकटीकरणले शारीरिक हानि वा वित्तीय हानि रोक्न आवश्यक छ, संदिग्ध अवैध गतिविधि रिपोर्ट गर्न वा अन्य उल्लङ्घनको खोजी गर्न आवश्यक छ।
तपाईं कुनै पनि समयमा हाम्रो अनुरोध गर्न निशुल्क हुनुहुन्छ नि: शुल्क, ट्राफिक र / वा मेटाउन / मेटाउनुभएको तपाईंको जानकारी को मेटाउन को लागि ईमेल पठाउन support@companyhub.com लाई पठाएर। हामी तपाइँको प्रत्येक अनुरोधलाई प्रक्रिया गर्नेछौं, तल उल्लेख गरिएको हाम्रो अवधारण नीतिको अधीनमा,
यदि तपाईंको ब्राउजर वा ब्राउजर ऐन-अन अनुमतिहरू भएमा तपाइँ हाम्रो कुकीहरू अस्वीकार गर्न निःशुल्क हुनुहुन्छ भने, जब सम्म हाम्रो कुकीहरू धोखाधडी रोक्न वा हामीले नियन्त्रण गर्ने वेबसाईटहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यद्यपि, हाम्रो कुकीहरू घटाउन हाम्रो वेबसाइट र / वा हाम्रो सेवा सुविधाहरू प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
यदि तपाइँ हाम्रो मार्केटिंग संचार प्राप्त गर्न वा हाम्रो प्रमोशनहरूमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, संचारमा प्रदान गर्न निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् भविष्यमा यस्तो संचारको अप्ट आउट गर्न।
हाम्रो सर्भरबाट तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी मेटाउनको लागि तपाईंको अनुरोधको पछाडि, हामीले व्यक्तिगत डेटालाई प्रयोग गर्न सक्दछ जस्तै प्रयोगको शर्तहरू अनुसार हाम्रा दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक छ जबसम्म लामो अवधारण अवधि आवश्यक छ वा कानून द्वारा अनुमति दिइएको हामी यस गोपनीयता नीतिमा उल्लिखित सबै जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दछौं। यस सन्दर्भमा कुनै पनि प्रश्नहरूको लागि हामी पुग्न सक्छौ।
हाम्रो उत्पादन र सेवाहरूको तपाईंको प्रयोग, र तिनीहरूबाट उत्पन्न भएका कुनै विवादहरू, यो प्राइभेसी नीतिको साथ-साथ हाम्रो प्रयोगको सर्तको विषय हो। कृपया हाम्रा प्रयोगका सर्तहरू भ्रमण गर्नुहोस्, जुन हाम्रो उत्पादन र सेवाहरूको प्रयोगमा अन्य नियमहरू बताउँछ।
यो नीति स्वीकार गरेर, तपाईं हाम्रो नीति संग्रह नीतिहरू, अवधारण नीतिहरू र यस नीतिमा उल्लिखित कुकी नीतिहरूको प्रयोगमा सहमत हुनुहुन्छ। प्रश्न वा चिन्ताको लागि, कृपया ग्राहक सेवा / गोपनीयता मा सम्पर्क गर्नुहोस् support@companyhub.com.
एक 15 मिनेट कम्पनी हब को सवारी लिनुहोस् र रोमांचित हुन तयार हुनुहोस्
यसलाई प्रयास गरौं 14 दिन निःशुल्क परीक्षण। कुनै क्रेडिट कार्ड आवश्यक छैन।
CRM तुलना गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2018 CompanyHub। सबै अधिकार सुरक्षित।
सुरु गर। सेटअप आवाश्यक छैन।
नाम आवश्यक छ
मान्य इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्
साइन अप गरेर, तपाईं हाम्रो सहमत हुनुहुन्छ गोपनीयता नीति र उपयोग नियम
मूल्य निर्धारण गर्न विवरण भर्नुहोस्
ओहो! त्रुटि भयो!